कोभिड-१९ भएका बेला शरीरमा अक्सिजन तह कति हुनुपर्छ, कम भए के गर्ने ? – Gorkhali Voice
कोभिड-१९ भएका बेला शरीरमा अक्सिजन तह कति हुनुपर्छ, कम भए के गर्ने ?
२०७८, २२ बैशाख बुधबार १४:४६
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अहिले जटिल अवस्थाका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको र अस्पताल भर्ना भएका धेरैलाई अक्सिजन दिनुपरेका समाचारहरू आइरहेका छन्।
अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अक्सिजन उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चले आपूर्तिमा समस्या नहुने तर सिलिन्डरको अभाव ‘ठूलै समस्या’का रूपमा देखा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण जटिल चरणमा जाँदा अक्सिजन कम हुने डा. सुवेदी बताउँछन्। अक्सिजन कम हुँदा निश्चित उपचार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
“त्यसै कारण कोरोनाभाइरस पोजेटिभ हुनेबित्तिकै हामी बिरामीलाई शरीरमा अक्सिजनको तह नाप्न सिकाउँछौँ,” उनले भने। सामान्यतया पल्स अक्सिमिटर भन्ने उपकरणले अक्सिजन नाप्दा तह ९५ देखि ९६ हुन्छ।
सामान्यतया कोरोनाभाइरसको लक्षण सुरु भएको करिब एक सातापछि मात्रै अक्सिजनको तह कम हुँदै जाने डा. सुवेदी बताउँछन्।
आफूलाई कहिलेबाट लक्षण सुरु भएको हो भन्ने कुरा थाहा पाएको अवस्थामा हरेक दिन वा छिन छिनमा अक्सिजन नापिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ। “हामी दिनमा दुई-तीन पटक नाप्न सुझाउँछौँ ,” उनले भने।
सामान्य अवस्थामा अक्सिजन ९५-९६ भएको व्यक्तिमा ९३ तिर देखियो वा घट्न थालेको सङ्केत देखियो भने चारदेखि पाँच घण्टामा नाप्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अक्सिजन कम भए अस्पताल जानैपर्छ?
अक्सिजन घट्न नदिन के गर्ने?
यसको ‘खासै ठूलो’ उपाय केही पनि ‘नभएको’ सुवेदी बताउँछन्। ”सकेसम्म फोक्सो स्वस्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पहिले देखिनै तपाईँले तयारी गर्ने हो। चुरोट खाइरहनुभएको छ भने छाड्ने। स्वास्थ्यकर बानीबेहोरा बाहेक अन्य केही उपाय छैन।” कतिपयले प्राणायाम, योगका अभ्यास गर्ने गरेको भए पनि त्यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क आफूलाई थाहा नभएकाले उनी आफू केही भन्न सक्ने स्थितिमा नभएको उनको भनाइ छ। अक्सिजन कम हुन लागेको सङ्केत देखिए सुत्दा घोप्टो पर्नु राम्रो हुने उनको सुझाव छ। “गाह्रो भए कोल्टे पर्ने। सकेसम्म उत्तानो परेर नसुत्ने। त्यो विचार गर्न सकिन्छ। त्यसले फाइदा गर्छ भनेर देखाएको छ। त्यो चाहिँ प्राय अक्सिजन घटिसकेका मान्छेलाई हामी सुझाउँछौँ। अक्सिजन घटेको जस्तो आफूलाई लाग्छ भने त्यस्तो अभ्यास गर्दा हुन्छ,” उनले भने।
खानपानले फरक पार्छ?
कुनै पनि खानाले शरीरमा अक्सिजनको तहलाई कायम गर्न सहयोग गर्छ भन्ने नदेखिएको डा. सुवेदी बताउँछन्। साधारण अवस्थाको आहारविहार नै कायम राख्न उनी सुझाउँछन्। “कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण हुँदा पनि गर्ने त्यही नै हो,” उनले भने। “झोल कुरा, पानीको मात्रा बढाउँदा राम्रो हुन्छ। मद्यपान गर्नु हुँदैन।” शरीरलाई विशेष खाना खाँदा अक्सिजन बढिरहन्छ भन्ने कुनै अध्ययनले नदेखाएको उनी बताउँछन् । BBC नेपाली सेेेवाको सहयोगमा ।
जापानमा भलिवल प्रतियोगिता आयोजनाबाट बचत रकम र्धुमुस – सुन्तली फाउण्डेशन लागि हस्तान्त्रण